>SF Burmese Community call for signature campaign this weekend | MoeMaKa Burmese News & Media
>SF Burmese Community call for signature campaign this weekend
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် မြန်မာပြည်သူတို့၏ လက်မှတ်ထိုး ပန်ကြားလွှာတွင် ပူးပေါင်းလက်တွဲကြမည်။
(၁) နေ့စွဲ။ ။ Saturday, April 30, 2011 (10:00am – 4:00pm)
နေရာ။ ။ ဥက္ကလံမြို့၊ မြန်မာ့ရိုးရာ သင်္ကြန်ပွဲတော်။
Cesar E. Chavez Education Center, 2825 International Boulevard = (E 14 St.), Oakland, CA.
ဆက်သွယ်ရန်။ ။ ကိုအောင်ဇာနည်(၆၆၁ ၃၄၅ ၇၉၃၅)၊ မခင်သီရီန္ဒာစိုး(၆၅၀ ၇၅၈ ၁၂၉၀)။
(၂) နေ့စွဲ။ ။Sunday, May 1, 2011 (3:00pm- 6:00pm)
နေရာ။ ။ မြန်မာပြည်ကို ကူညီကြစို့(Project Help Burma) စေတနာရှင်နှင့် လုပ်အားပေးသူများ တွေ့ဆုံပွဲ။
540, 23rd Street, Oakland, CA 94612.
ဆက်သွယ်ရန်။ ။ မအေးရီဌေး(၅၁၀ ၇၁၂ ၄၉၄၆)၊ ဦးမောင်မောင်လတ်(၅၁၀ ၅၃၃ ၆၄၂၄)။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် မြန်မာပြည်သူတို့နှင့် အတူ မိမိတို့က တထပ်တည်း တသဘောတည်း ရပ်တည်ကြောင်း ပြသရန် ယခု လက်မှတ်ထုိုးပန်ကြားလွှာတွင် လက်တွဲကြပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။
(၁) အင်န်အယ်လ်ဒီ (လွတ်မြောက်နယ်မြေ၊ ယူအက်စ်အေ)(NLD-LA-USA)
(၂) မြန်မာ့ကျောင်းသားများ အစည်းအရုံး(San Francisco Bay Area,USA)
(၃) မြန်မာအမေရိကန် ဒီမိုကရေစီ မဟာမိတ်အဖွဲ့ (BADA)
(၄) မြန်မာအမေရိကန် အမျိူးသမီး မဟာမိတ်အဖွဲ့ (BAWA)
(၅) သုံးရောင်ခြယ် (ယူအက်စ်အေ)
(၆) မိုးမခ မီဒီယာ စာနယ်ဇင်းအဖွဲ့၊ ဆန်ဖရန်စစ္စကို ဘေးဧရိယာ။
(၇) Human Rights Human Light (City College of San Francisco)
အောက်ဖော်ပြပါနေရာတွင် ဧပြီလ(၁၇)၊ ၂၀၁၁ ပထမဦးဆုံးအကြိမ် စုဆောင်းရရှိ တင်သွင်းခဲ့ပြီးဖြစ်သော ပြည်သူတို့၏ လက်မှတ်ထိုး ပြန်ကြားလွှာမိတ္တူများကို ရယူကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
ဤနေရာမှာ မိမိတို့ ရောက်ရှိရာ နိုင်ငံ၊ မြို့နယ်အတွင်း လက်မှတ်ထိုးရန် ဖောင်များ ပုံနှိပ်ထုတ်ယူရန် ပုံစံကို ရယူနိုင်ပါသည်။
အောက်ဖော်ပြပါ နေရာကတဆင့် အွန်လုိုင်းလက်မှတ် ထိုးနိုင်ပါသည်။
>Htain Linn - Politics and Literature 60